Shiinaha Dhexdhexaad Speed ​​Jelly Glue warshad iyo alaableyda | Gelken
Jelly xabagta waa nooc ka mid ah xabagta xayawaanka, kaas oo loo isticmaalo warshadaha daabacaadda iyo baakadaha kadib marka si qoto dheer loo farsameeyo. Sababtoo ah waxay umuuqataa jelly, sidoo kale loo yaqaan jelly xabagta.
Wax soo saarka lagu soo saaray adoo isticmaalaya xabagta jelly ma aha mid qaab daran, mana fududa in caaryado iyo xumbay noqdaan, waxayna xoojin karaan adkaanta waraaqaha. Marka lagu daro nafwaaji xoog leh, xabagta jelly waxay leedahay jilicsanaan dhexdhexaad ah, sidaa darteed qaybaha laaban ee buugaagta adag, qaamuusyada ma sahlana in la jabiyo.
waxaan soo saareynaa xabagta jelly sanduuqa adag, xabagta jelly daboolka adag, jelly xabagta loogu talagalay lafdhabarta buugga, jelly xabagta loogu talagalay buuga qabashada, jelly xabagta jadwalka miiska, jelly xabagta loogu talagalay album sawir.
Xawaaraha dhexdhexaadka ah xabagta gelatin waxaa badanaa loo isticmaalaa mishiinada otomaatigga ah, sida:
xabagta jelly ee mashiinka wax lagu dhejiyo ee semi-automatic ah
xabagta jelly mashiinka samaynta kiiska semi-automatic
xabagta jelly ee mashiinka daboolaya sanduuqa adag ee adag
xabagta jelly mashiinka samaynta adag adag semi-automatic
Marka loo eego hababka wax soo saarka iyo qalabka kala duwan, xabagta jelly-ka ayaa qiyaas ahaan loo kala qaataa sida soo socota:
1. Jelly xabagta loogu talagalay qalabka xawaaraha hooseeya ee semi-otomaatigga: Mashiinka gacanta ama nus-otomaatiga ah. Xawaaraha qalajinta ee noocan ah xabagta ayaa gaabis ah, xabaguna way ku dhegnaan doontaa 120 ilbidhiqsi gudahood ka dib marka warqadda dusha la miiro. Tani waxay u oggolaaneysaa waqti ku filan oo shaqada lagu dhammeeyo gacanta. Waxay ku habboon tahay mashiinka dhajinta semi-otomaatiga ah, mashiinka isku dhafan ee semi-otomaatiga ah, mashiinka qaadashada kiiska ee semi-otomaatiga ah, mashiinka dhajinta iwm.
2.Jelly xabagta for xawaaraha dhexdhexaad mashiinka qaadashada kiiska: Waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka ee sanduuqyada hadiyado kala duwan, xawaaraha daaweynta waa dhakhso, waqtiga qalajinta waa qiyaastii 60 ilbiriqsi. Waa koollo jelly xawaare dhexdhexaad ah oo caadi ah, xabagta ayaa xoojin kara adkaanta kartoonka, oo leh jilicsanaan xoog leh, oo ku habboon qalabka kululaynta kiiska semi-otomaatigga ah, mashiinka daboolaya sanduuqa adag.
3.Jelly xabagta for xawaaraha sare mashiinka cover buugga: Waxay ku habboon tahay buugga adag. Waxay leedahay astaamaha xawaaraha lagu daaweynayo dhakhsaha badan, adkaanta sare, laabashada xoogan, xawaaraha ugu sareeya wuxuu la socon karaa mashiinka 60-80s daqiiqadii. Waxay ku habboon tahay mashiinka duubista buugga xawaaraha sare leh oo otomaatig ah oo buuxa.
4. Jelly xabagta loogu talagalay khadadka waxsoosaarka isku xirka adag: xabagta ayaa si gaar ah loogu talagalay lafdhabarta buugga. Waxay leedahay astaamaha xawaaraha sare iyo nafwaaji sare.
Hore: Xawaaraha Jelly Speed ​​Muuska
Xiga: Buugga Xawaaraha Gaaban Jelly Glue